प्रधानमन्त्रीले मैथिली भाषामा ट्विीट गर्नुको रहस्य के ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
प्रधानमन्त्रीले मैथिली भाषामा ट्विीट गर्नुको रहस्य के ?
सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत मधेशको विकास तथा समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रदेश २ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको ज्ञापनपत्र बुझेपछि ओलीले मैथिली भाषामा ट्विट गर्दै मधेशको भावना सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् ।
ओलीले प्रदेश २ का सांसदहरुको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि लगातार तीनवटा ट्विट गरेका छन् । जसमध्ये उनले मैथिली भाषामा दुईवटा ट्वीट गर्दै मधेशको मन जित्न खोजेको देखिन्छ । ओलीले मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सिञ्चाई तथा डुबान समस्याको समाधानका लागि सांसदहरुले देखाएको अग्रसरताप्रति धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत तराई मधेशको विकास तथा समृद्धिको चाहना सम्बोधन गरिने आश्वासनसमेत दिएका छन् । हालैमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको शुरुवात जनकपुरबाट गराउँदै ओलीले मैथिली संस्कृति अनुरुपको पोशाक लगाएर जानकी मन्दिरबाट सम्बोधन गरेका थिए ।।